४४३ प्रहरी जवान हवल्दारमा बढुवा, को–कोले पाए मौका? (नामसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
४४३ प्रहरी जवान हवल्दारमा बढुवा, को–कोले पाए मौका? (नामसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ४४३ जवानलाई हवल्दारमा बढुवा गरिएको छ । जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त रहेको ४४३ हवल्दार पदमा प्रहरी जवानको बढुवा गरिएको हो । बढुवा समितिको सिफारिसको आधारमा बिहीबार यो निर्णय गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्